Vamwe veChidiki veZanu-PF Vonakurira VaMugabe Nyoka Mhenyu Vachiti Vakauraya Hupfumi hweNyika
Vamwe vechidiki mubato reZanu-PF vanoti matambudziko ose ari munyika akakonzerwa nevaimbova mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe nechikwata chaivatsigira cheG40.
Vachitaura neChitatu kuMasvingo pamusangano waizeya nezvekuyedza kukwezva vekunze munyika pasi pehurongwa hwehurumende hwekuti Zimbabwe Is Open for Business, mumwe wechidiki weZanu-PF VaTafadzwa Mugwadi vanoti mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya panyaya yekuvharwa kwemabhizimisi munyika vachiti VaMugabe ndivo vaitungamira.
“Zviri pachena kuti nyika yedu yanga yavharirwa mabhizimusi naVaMugabe and the captured cabal ye G40…nekutora nekuba zvinhu sema mine, saka VaMnangagwa vakauya nechirongwa chekugadzirisa izvi kuburikidza neZimbabwe is Open for Business kuti nyika inake.”
Asi vamwe vaiva pamusangano uyu vakashora VaMugwadi vachiti vanoda kuchenesa VaMnangagwa avo vaiva chipanga mazano waVaMugabe muhurumende ye ZanuPF kubva nyika ichiwana kuzvitonga kuzere.
mutauriri we MDC muMasvingo , VaSimon Mupindu vakati chirongwa ichi hachisi kubetsera nyika asi vakuru veZanu PF uye chiri kuitirwa kukwezva rutsigiro kuvanhu pasarudzo dzegore rino.
“Policy yekuti Zimbabwe is Open for Business yanga yakana zvikuru dai yakagadzirwa nevanhu vatanga vagadzirisa history yavo, maitiro eZanu PF kuti pose painoita sarudzo vanouya nemumwe mutauro , paya vakati tauya ne ZIMASSERT asi hapa na chinobuda.”
Muzvare Esther Chimanikire anoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reMasvingo United Residents and Rate Payers Alliance (MURRA) vanoti vagari havasi kuona zviri kuva batsira pakuitwa kwechirongwa ichi.
“Zimbabwe is Open for Business tiri kuona sekuti ma statement, tiri kuona kuti madhiri arikuitwa zvese zvaisaina va chitenderera nyika dzose, still hazvisi kubenefita the ordinary resident.”
VaTaurai Mazhambe sachigaro we Zimbabwe Chamber of Informal Traders Association, vakati chirongwa che hurumnde chiri kushambadzwa zvakanyanya asi hachisi kubatsira vanozviitira mabasa emaoko.
Asi VaMugwadi vakati chirongwa ichi chiri kubudisa pundutso sezvo makambani munyika akawana mari inosvika mamirioni zana kubva kunyika yeBritain iyo yakange isingasa kudyidzane ne Zimbabwe.
Hurukuro ye gakava iri yakanga yakarongwa neMURRA pamwe chete ne Crisis in Zimbabwe Coalition.